I-Safa iphika izinsolo zokugwazela oweFifa | News24
I-Safa iphika izinsolo zokugwazela oweFifa
Johannesburg – Izinsolo ezithi iNingizimu Afrika yathembisa ukugwazela lowo owayeyisekela likamengameli weFifa ngo-$10-million ukuze lelizwe lithole ilungelo lokusingatha imidlalo yeNdebe yoMhlaba ka-2010 ayinasisekelo, kusho okhulumela iSouth African Football Association ngoLwesithathu.
“Sidumele kakhulu ngezinsolo... Azinasisekelo futhi sicela ubufakazi kulabo abanabo,” kusho uDominic Chimhavi.
Funda nalolu daba: Akusolwe aphikisayo ngendlala yezepolitiki
“Umkhankaso wethu wokusingatha imidlalo wawuholwa abantu abafana noNelson Mandela kanye noThabo Mbeki nabanye ongqongqoshe, okungabantu abathembekile,” kusho uChimhavi.
Esithangamini sabezindaba eNew York ngoLwesithathu, uGeneral Loretta Lynch waseMelika uthe lowo owayeyisekela likamengameli weFifa, Jack Warner, wafuna ukukhokhelwa u-$10-million nguhulumeni waseNingizimu Afrika ukuze lelizwe lisingathe iNdebe yoMhlaba ka-2010.
UWarner ukhiphe isitatimende ethi umsulwa.